Site n'echiche nke onye na-ere ahịa, ekwenyere m n'ezie na eziokwu dịwanye elu nwere ikike karịa karịa nke eziokwu. Ọ bụ ezie na eziokwu dị adị ga-eme ka anyị nwee ahụmịhe zuru oke, eziokwu dịwanye elu ga-eme ka anyị na ụwa anyị bi na ya ugbu a kwalite ma mekọrịta ihe. AR nwere ike imetụta ahịa, ma ekwenyeghị m na anyị akọwachaala eziokwu dị elu ma nyekwa ihe atụ.
Ihe omuma atu di na ahia bu ihe nke Yelp na ha mobile ngwa akpọ Monocle. Ọ bụrụ na ibudata ngwa ahụ ma mepee menu ndị ọzọ, ị ga-ahụ nhọrọ akpọrọ Monocle. Mepee Monocle na Yelp ga - eji ọnọdụ ọnọdụ gị, ọnọdụ ekwentị gị na igwefoto gị kpuchie data ha site na igwefoto. Ọ mara ezigbo mma - ọ na-eju m anya na ha anaghị ekwu maka ya oge niile.
Mgbanwe malitere enyo mmekorita maka ntaneti ahia ebe onye oru a nwere ike ihu otu ha gha adi nma na etemeete, ntutu, ma obu ihe eji etinye aru. Sephora weputara teknụzụ ha site na ngwa mkpanaka.